WARARKA BARAAWEPOST Talaado 18 march 2008
Suldaan Xaydar oo maanta kula kulmay hotel Shamo Xildhibaan Caamir Jakeeti iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha Banaadir.
Xaflad Si heer sare loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay hotel Shamo ee magaalada Muqdisho. Xafladaas ayaa ku saabsanayd salaan sharaf ay odayaasha beelaha Banaadiriga oo uu horkacayay Xildhibaan Caamir jakeeti ugu tageen Suldaan xaydar Suufi Munye oo ah suldaanka guud ee beelaha Baraawe (Shangamaas,Toddoba Tol Iyo Toore).
Xildhibaan Caamir Jakeeti ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmo Suldaan Xaydar oo muddo toddoba iyo toban sanno ah ka maqnaa waddanka haatanna dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo. Sidoo kale Suldaan Xaydar ayaa halkaas mahad ballaaran uga jeediyay Xildhibaan Caamir Jakeeti iyo odayaashii uu horkacayay ee salaanta ugu yimid, isagoo sheegay Suldaanku in beelaha banaadir iyo Beelaha baraawe ay yihiin dad wadadhashay oo uu ka dhexeeyo xiriir iyo taariikh dheer oo soo jireen ah isla markaana ay yihiin beelo aan marna kala goi karin. Beelahan oo ah beelo taariikh dheer ku leh sooyaalka taariikhda Soomaaliya ayaa ah dad nabadda jecel islamarkaana ay waddaniyaddu iyo soomaali jaceylka ku weyn tahay ahna beelihii horseedka ka ahaa la dagaalanka gumeysigii talyaaniga isla markaana kaalin weyn ka qaatay madaxbannaanida Soomaaliya.
Xildhibaan caamir ayaa halkaas uga warbixiyay odayaashii goobjoogga ka ahaa xafladda wadciga uu haatan waddanku marayo isla markaana uu ka codsaday odayaasha dhaqanka inay midoobaan iskuna duubnaadaan si loo horumar loo gaaro xildhibaanka ayaa odayaasha xusuusiyay halkudhigii ahaa ( Gacmo wadajir bey wax ku gooyaan iyo wadajir waa lagu guuleystaa kala tagna waa lagu jabaa).
Wuxuuna xildhibaanku illahay uga baryay ummadda soomaaliyeed inuu dhibka ka qaado horumar iyo barwaaqona ugu beddelo.
Odayaashii xafladaa goobjoogga ka ahaa waxaa ka mid ahaa:
Dhanka nabadoonada qowmiyada banadiriga.
1 Xoghayaha dhaqanka qowmiyada banaadiriga Ahmed iikar Xaaji Cabdulahi,
2-Malaaq Suufi Cadde Muuddey
3- Malaaq Sayid Cabdulahi
4- Malaq Mahdi Xaji nuur (maariyo)
Dhanka beelaha baraawe waxaa goobjoog ka ahaa Suldaan Xaydar Suufi Munye, Dr Aweis Sheekh Muumin, Nabadoon Maxamed Cabdulqaadir Faqi oo ah afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka ee Baraawe, Garsoore Dr Shariif Kuulow oo ah guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka ee gobolka shabeelada hoose iyadoo odayaashu dhamaantood ay halkaas ka soo jeediyeen qudbado isugu jiray guubaabin iyo xasuusin taariikhda faca dheer ee lagu yaqaan beelahaas.
Shabakada Warbaaahinta Baraawepost Muqdisho